Sii deyntii Silvia Romano iyo dilkii George Floyd, maxay soomaalidu ka baran karaan! – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jun 2, 2020 684 0
Haddaba bal aynu u nimaadno George Floyd oo ahaa nin mareykan ah oo madow, da’diisa waxa lagu sheegay 46jir. George waxa jilib ku diley askari mareykan ah oo caddaan ah. Weliba isagoo laga duubayo muuqaal. Waxa layaabka leh waxa ay ahayd iyada oo askarta la socotey haba yaraatee aaney wax diirnax ah u muujin George Floyd oo ku qaylinayey “Naqaskaa i haya, ama ma neefsan karo” sidaasna ku qudhbaxay isagoo jilib luqunta lagaga hayo. Haddaba mareykanka oo dadka looga dhigo meel sharciyaddu wax walba ka sarreyso ama bina aadamnimo(Humanity) waxa loogu yeedhaa ay ka jirto waa meesha noocaas ah. Waa meesha cunsuriyadda iyo arxan darrada intaas leegi taallo.
Naxdintii ayaa labadii macalin kiiaan waxba sidani yidhi “Mwesa” oo ah afsawaaxili, noqnaysana “Tuug”, ilaaladii gaalada oo kiiniyaan ahaa ayaa intey soo dageen yidhi “Mwesa?” ma tuug. Naxdintii ayaa uu haddana yidhi “Ndiyo” oo ah “Haa” Markii ninkii la qabtey ayuu saaxiibkii ku yidhi: Waar saaxiib gaalada igala hadal. Isna waxa uu yidhi saaxiibow laba erey baan ka aqaanney af sawaaxiliga, labadiina waa kuwa aan kugu xidhay ee wax aan kugu soo daayo ma garanayo.